कल्पना प्रधान सानो छँदा
खोई देउता रिसाएनन् ? कसैको मुख बांगिएन ?
मेरो सानो खरायो,
आज कता हरायो !
हिजो सँगै खेलेथ्यौं,
घरभित्र भुलेथ्यौं !
को पहिले पुग्ने हो,
भन्दै हामी कुदेथ्यौं !
खोज्दाखोज्दै बित्यो दिन,
डुब्न लाग्यो घाम ।
कल्ले देला बुबु उल्लाई,
कल्ले देला माम ?
चिथोर्छ कि बिरालोले,
गर्छ म्याउँ-म्याउँ ।
खोजी गर्न लौ न आमा,
हामी सगै जाऔं ।
खाटमुनि लुक्यो कि !
आगनीमा पुग्यो कि !
भालु आई चोरेर
जंगलतिर लग्यो कि !
यो रमाइलो कविता सबैले सुनेको र पढेको कविता हो । यो कविता कल्पना प्रधानले लेख्नुभएको हो । यही कविताको एउटा प्रसंग छ । कुरा २०२६ सालको हो । कल्पना प्रधानले आफ्नो दुईवर्षे छोरोका निम्ति एउटा दम दिएर चल्ने खेलौना खरायो किनिदिनुभयो । खाली ‘चिची’ भनेर मासु खान माग्ने छोराको बानी कम गर्न उहाँले खेलौना खरायो किनिदिनुभएको थियो । छोरो त्यही खरायोसँग खेल्थ्यो । अल्मलिन्थ्यो । एकदिन त्यो खरायो हरायो । खरायो हराएपछि नाबालक छोरा रुन, कराउन थाल्यो । कसले चोर्‍यो ? थाहा भएन । छोरो भने ‘खरायो हरायो’ भनेर कराइरह्यो । राति सुतेन । बल्लबल्ल निदाएको छोरो निद्रामा हुँक्क हुँक्क गरिरह्यो । छोराको चित्त दुखेकोमा उहाँ निकै दुःखी हुनुभयो । छोरो त सुत्यो । उहाँलाई निद्रा लागेन । उठेर एउटा कविता केर्नुभयो । त्यो रात त्यसै बित्यो । बिहान भयो । ‘बालक’ पत्रिकाका सम्पादक वासु रिमाल ‘यात्री’ एकाबिहानै प्रधानका घरमा आउनुभयो । त्यसबेला कल्पना माथिल्लो तलामा केही काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो । यात्रीले कल्पनाले लेख्नुभएको कविता पढ्नुभयो । ‘यो कसले लेखेको हो ?’ यात्रीले कल्पनाका पति परशु प्रधानलाई सोध्नुभयो । परशुले भन्नुभयो, ‘श्रीमतीले लेखिन् होला ।’ यात्रीले कविता मनपरेको बताउँदै खल्तीमा हाल्नुभयो । राम्रो छैन जस्तो लाग्दै कल्पनाले लाज मान्नुभयो । उहाँलाई के भनौं के नभनौं ? भयो । कविता ‘बालक’ मा छापियो । त्यही कविता जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रले सुरुमा कक्षा ३ को र पछि कक्षा २ को ‘महेन्द्रमाला’ मा समावेश गर्‍यो । कविता छापिएपछि कल्पनालाई लेख्ने जाँगर चल्यो । त्यो जाँगरले धेरै पुस्तकको जन्म भयो । एउटा रमाइलो कुरा के छ भने ‘खरायो हरायो’ भनेर रुने कल्पनाका ती छोरा प्रतीक प्रधान अहिले ‘दी काठमान्डू पोस्ट’ का सम्पादक हुनुहुन्छ ।
प्रा. हरिश्चन्द्र न्यौपाने एक सय एक वर्षका हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाली र संस्कृत भाषाका भाषाविद् र राजगुरु हुनुहुन्छ । विभिन्न कलेजमा २८ वर्ष र राजपरिवारका विभिन्न सदस्यलाई करिब ४० वर्ष पढाउनुभएको छ । उहाँले पढाएका कलेजमा दरबार कलेज (यो कलेज पछि गएर त्रिचन्द्र कलेजमा गाभिएको थियो), त्रिचन्द्र कलेज, सरस्वती कलेज, न्यासनल कलेज, वाल्मीकि संस्कृत महाविद्यालय हुन् । उहाँ वि. सं. १९६४ भाद्र कृष्णप्रतिपदा (भदौ ८ गते शनिबार) भक्तपुरको झौखेलमा जन्मनुभएको हो । उहाँका पिताको नाम पं. नन्दीकेशर र माता गंगादेवी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ भक्तपुरको झौखेल गाविस ४ मा जन्मनुभएको हो । उहाँले भारतको बनारसस्थित गवर्नमेन्ट संस्कृत कलेजबाट साहित्याचार्य गर्नुभएको छ । २००४ सालमा नेपाल सरकारको सेवा थाल्नुभयो र २०३४ सालमा सेवानिवृत्त हुनुभयो । उहाँका विद्यार्थी धेरै छन् । न्यौपानेले विख्यात त्रिशक्तिपट्ट, गोरखा दक्षिणबाहु तृतीय, शुभराज्यभिषेक पदक र गद्दीआरोहण रजतमहोत्सव पदक पाउनुभएको छ । मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट बिरामी न्यौपाने विभिन्न चिकित्सकसँग उपचार गराइरहनुभएको थियो । यसपटक काठमाडौंको मालीगाउँका बस्दै आउनुभएका न्यौपानेका बाल्यकालका केही सम्झना : Read More »
सुधा त्रिपाठी लामो समयदेखि नेपाली प्राध्यापन गराउँदै आउनुभएको छ । साहित्यमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँ २०१५ साल जेठ २८ मा दार्जिलिङको मिरिकमा जन्मनुभएको हो । उहाँका पिताको नाम जगन्नाथ शर्मा त्रिपाठी र माताको नाम भवानीदेवी त्रिपाठी हो । अहिले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली केन्द्रीय विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ । २०३१ सालमा कविता लेखेर साहित्यमा लागेकी सुधाले धेरै कविता, कथा, निबन्ध, नाटक, समालोचना, समसामयिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रचना तयार पार्नुभएको छ । निबन्ध, नाटक, समालोचना आदि गरी उहाँका नौ पुस्तक प्रकाशित छन् । उहाँ अभ्युत्थान महिला साहित्य प्रतिष्ठानको अध्यक्ष, प्रगतिशील लेखक संघ नेपालको उपाध्यक्ष साथै विभिन्न संस्थामा संलग्न हुनुहुन्छ । उहाँ जनआन्दोलन २ मा पक्राउ परी दुई साता थुनिनुभयो । त्यसबाहेक उहाँ पटकपटक पक्राउ पर्नुभएको छ । उहाँले पारिजात सृजन पुरस्कार, युद्धप्रसाद मिश्र पुरस्कार, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज उत्कृष्ट पुरस्कार आदि पाउनुभएको छ । दोलखाको सुनखानीमा पुर्ख्यौली थलो भएकी त्रिपाठीका बाल्यकालका केही सम्झना : Read More »